Dhibaatadu maaha blogging, dabcan. Waxaan haystaa aqrin badan oo ku saabsan balooggeyga - laakiin waxaan u la'yahay sii wadista inaan si joogto ah ugu qoro nuxurka mawduucyada ii horseedaya beddelaad aniga. Sidoo kale, wax wicitaan ah kama haysto ficilkeyga dhinaceyga.
Waxaan had iyo jeer ku cabiray guusheyda tirada macaamiisha RSS iyo kaqeybgalka (iyada oo loo marayo faallooyinka bogeyga). Waxaan dib uga fakaraa istiraatiijiyaddaas! Haddii aan doonayo inaan wado dakhli oo aan uga faa'iideysto sida mareeg ganacsi, waxaan u baahanahay inaan bartilmaameedsado nuxurkeyga si aan ugu guuleysto raadinta shuruudaha la xiriira waxa keena dakhliga. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan bixiyo a wadada boggeyga si aan u qabsado oo aan u cabbiro beddelaadaas.
Ilaa aad si uun ula jaanqaadi karto nashaadaadka meheradda, waa si fudud cabirkeed. Taasi maaha in la yiraahdo ma doonayo faallooyin… waa kaliya inaanan u isticmaali doonin faallooyinka tilmaame sida ay u wanaagsan tahay balooggeygu.